MyanCare | Hepatitis B viral infection ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
သည်နေ့တော့ Hepatitis B virusလို့ခေါ်တဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးအကြောင်း ဆွေးနွေးသွားပါမယ် ။
Hepatitis B virus ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုး ဘယ်လိုကူးစက်သလဲ ?
အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးသည် သွေးမှတဆင့် ကူးစက်နိုင်သလို ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သောအရည်(secretion)အကုန်လုံး
eg ချွေး , တံတွေးတို့မှတဆင့်လဲ ကူးစက်ပါတယ် အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးပါသော သွေးသွင်းမိခြင်း ,အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးပါသော အပ်ဖြင့် ဆေးထိုးခြင်း , ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးခြင်း , နားဖောက်ခြင်း , အပ်စိုက်ခြင်း , အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးရှိသောသူနှင့် ဘလိတ်ဓား မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား သွားတိုက်တံ အစရှိသည်တို့ကို အတူတကွသုံးစွဲခြင်း တို့အပြင် အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးရှိသောသူနှင့် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း တို့မှလဲ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင် အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ဆီမှ ကလေးကိုလဲ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးကူးစက်ခံရသူအနည်းငယ်သာ Non-specific prodromal illnessလို့ခေါ်တဲ့ ဘယ်ရောဂါဖြစ်နေလဲတိတိကျကျမပြောနိုင်သော လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း , မစားချင်မသောက်ချင်ဖြစ်ခြင်း , ပျို့အန်ခြင်း , ဝမ်းလျှောခြင်း , ဗိုက်အောင့်ခြင်း , ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း , အရိုးအဆစ် ကြွက်သားတွေ နာခြင်း , ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း , ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း အစရှိတဲ့ လက္ခာတွေကို အသားမဝါခင် ရက်အနည်းငယ်ကနေ ၂ပတ်အတွင်း ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ ခံစားရလေးရှိပြီး အသည်းရောင်အသားဝါ Bပိုးကူးစက်ခံရသူအများစုကတော့ ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ chronic carrierလို့ခေါ်တဲ့ နာတာရှည်ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သူအဖြစ်နဲ့အခြားသူများကိုကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးရှိကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
အသည်းရောင်အသားဝါ Bပိုးရှိကြောင်းကို HBsAg လို့ခေါ်တဲ့ virusရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ surface proteinတစ်မျိုးကို သွေးစစ်ခြင်းအားဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်း , အသည်းခြောက်ခြင်းနှင့် အသည်းကင်ဆာဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ် ။
အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးအတွက်Antiviral agents တွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း စနစ်တကျရေရှည်ကုသမှုခံယူရန်လိုပါသည်။
အသည်းရောင်အသားဝါ Bပိုးကာကွယ်ဆေးကို စနစ်တကျထိုးနှံထားခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ Bပိုးရှိသူမိခင်မှမွေးလာသောကလေးကို ၂၄နာရီအတွင်း ,၂လ,၄လ ,၆လ, ၁နှစ်နှင့် ၅နှစ်တွင် အသည်းရောင်အသားဝါ Bပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းနည်းနိုင်သမျှနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် မွေးပြီး၂၄နာရီအတွင်း HBsAb ခေါ်Immunoglobinထိုးခြင်းအားဖြင့်လဲ ကူးစက်မှုနှုးပိုနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးကင်းစင်ကြောင်းစစ်ဆေးထားသော သွေးကိုသာသွင်းခြင်း , အခြားသူတစ်ဦး၏ သွေးနှင့်ဆက်စပ်သော ပစ္စည်းကို တိုက်ရိုက်မထိမိစေရန် သတိထားကိုင်တွယ်ခြင်း , တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကို အသုံးပြုခြင်း , အသုံးပြုပြီးသော ဆေးထိုးအပ်များကိုလဲ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြင်း , ဘလိတ်ဓား , မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား , သွားတိုက်တံ အစရှိသည့် တစ်ကိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်းများအား သီးခြားစီအသုံးပြုခြင်း , အသည်းရောင်အသားဝါ Bပိုးရှိသူနှင့် လိင်ဆက်ဆံလျှင်လဲ အကာအကွယ်အသုံးပြုခြင်း အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။